Tontolon’ny fambolem-bary: 55 % ny lemaka mila fanajariana sy fanavaozana | NewsMada
Tontolon’ny fambolem-bary: 55 % ny lemaka mila fanajariana sy fanavaozana
Tokony hojerena akaiky ny tontolon’ny fambolem-bary. Mbola tsy tambo isaina ny olana manerana ny faritra maro. Nilaza ny ao amin’ny minisiteran’ny Fambolena, ny fiompiana ary ny jono fa hizaha vahaolana hiatrehana ny taom-pambolena vaovao.
45 % ny lemaka azo ampiasana na efa voajary; 55 % ny izany mila fanajariana, fanavaozana tanteraka sy fanitarana hampitomboana ny velaran-tany volena, raha ny nambaran’ny minisiteran’ny Fambolena. Mihena ny velaran-tany azo volena amin’ny ankapobeny manerana ny Nosy, raha jerena ny zava-misy, toy ny lemak’i Marovoay, izay efa ampolo taona maro tsy nisy fikarakarana. Ny any Alaotra, malaza ho sompitr’i Madagasikara, sahirana isan-taona ny mpamboly, mitombo hatrany ny velaran-tany tototry ny antsanga, ny rano tsy ampy. Ankehitriny, miantso ny minisitera ny mpamboly any an-toerana hanidy ireo tohodrano ho fitsinjovana ny taom-pambolena manaraka, sao tsy misy orana.
Miantso ny fandraisan’anjaran’ny rehetra ny minisitera hikojakoja ireo lakandrano, ny tohodrano any aminy avy manomboka ny volana jolay izao, ny aogositra sy ny septambra hiatrehana ny taom-pambolena manaraka. Tsy manana ny ampy hiatrehana avokoa izany anefa ny tantsaha, noho ny tsy fisian’ny fitaovana, fa ilana teknisianina koa izany manampy ny mpamboly.
Tetikasa “Fy vary”
Anio ao amin’ny minisiteran’ny Fambolena, misy fivoriana momba ny tetikasa “Fy vary”, fiaraha-miasan’i Madagasikara sy i Japana. Tanjona amin’izao tetikasa izao ny fampandrosoana ny lafiny teknika hahavokatra betsaka. Ankoatra ny minisiteran’ny Fambolena, mandray anjara amin’izao fanatanterahana « Fy vary » izao ny Fofifa (Foibe fikarohana fampandrosoana ny any ambanivohitra), ny oniversite Antananarivo, ny ONN (Office national de nutrition).
Ny avy amin-dry zareo Japoney: Jircas (Centre japonais de recherche internationale pour les sciences agricoles), ny oniversite Kyoto, Tokyo, sy Yamanishi Eiwa. Nanomboka tamin’ny 2017 hatramin’ny 2022 ny tetikasa, atao any Alaotra Mangoro, any Vakinankaratra sy eto Analamanga.